Eey caafimaad qaba oo lala aasay qofkii lahaa oo dhintay - BBC News Somali
Eey caafimaad qaba oo lala aasay qofkii lahaa oo dhintay
Image caption Eeyga la duugay
Eey nool oo caafimaad qaba ayaa lala duugay qofkii lahaa oo ku dardaarmay in sidaas la yeelo marka ay dhimato sida ay tabinayso warbaahinta Maraykanka.
Eeygan oo lagu magacaabo Emma oo dhedig ah ayaa la sheegay in foorno la galiyay oo lala gubey maydka islaantii lahayd, kadibna dambaskooda la wada aasay.
Shaqaalaha goob xayawaanka lagu xanaaneeyo oo ku taala gobolka Virginia ayaa aad isugu dayay in ay is hortaagaan arrintan, balse eheladii haweenayda dhimatay ayaa ku adkaystay in la fuliyo dardaarankeedii.
"Waxaan soo jeedinay in eeyga ay u saxiixi karaan qof kale oo xanaanaysta, kuwaas oo si sahlan loo heli karo, balse waa ay naga dhego adkaysteen" ayuu yiri Carrie Jones oo ah maamulaha xarunta Chestefield ee xanaanada xayawaanka gobolka Virginia.
Dalka UK waxaa ka jira sharci ogolaanaya in xayawaanka rabbaayadda ah lala duugo qofkii lahaa haddii lasoo buuxiyo shuruudo gaar ah sida uu BBC-da u sharaxay afhayeen u hadlay urur ay leeyihiin dhaqaatiirta xoolaha ee Britain.
Eey illaalo loo sameeyay kadib markii lacag badan madixiisa la dul saaray si loo dilo
Waxa uu sheegay in shuruudaha ay ka midyihiin in xayawaanka uu yahay mid dhaqan xun oo dadka kale waxyeeleyn kara, iyo in aanan la heleynin cid dhaqata qofka leh dabadiis.
Sharciga gobolka Virginia ee dalka Maraykanka ayaa qaba in xayawaanka rabbaayadda ah ay yihiin hanti uu leeyahay qofka heysta, sidaasi darteedna uu qofka ka yeeli karo sida uu doonayo.
Waxaaba jira in qabuuraha gobolkaas ku yaala mid ka mid ah uu leeyahay qeyb loogu talogalay in lagu aaso xayawaanka.
6 Abriil 2018
Halka bilyan ee Eey ee dunida ku nool oo khatar ku haya duurjoogta
12 Febraayo 2019